I-Stels 450 Enduro: amandla alula
представитель класса лёгких мотоциклов. Ushayela i-450 Enduro - ummeleli wekilasi lesithuthuthu ezikhanyayo. Kuhle kakhulu ngabathandi bobabili ukushayela nokuthutha ngokweqile kunoma yiluphi uhlobo lomgwaqo, kanye nakwezingxenye ezinzima zomgwaqo. Umklamo wenziwa ngesitayela esincane - amasondo anezimoto zokuhamba ngezinyawo, uhlaka lwe-aluminium elincane, olungamelana nomthwalo omkhulu, ukumiswa ngengozi enkulu, kanye nokuyingcosana yezingxenye zeplastiki.
Ehlome nge-motor enamandla, ngaphandle nje ayikuphi ngokumelene nesizinda sesithuthuthu kusuka kumgqa wokugcina, onomthamo we-150-200 cm 3 . Ekudaleni imodeli, zonke izifiso zabashayeli ababenesikhathi sokuhlola ngesithuthuthu se- Stels 400 Enduro zicatshangelwa , impendulo mayelana nokuthi yiyiphi into enhle. Lo modeli ufanelekile kokubili ukulinganisa okulinganiselwe kuzungeze idolobha, kanye namathrekhi ochwepheshe ngezingubo zokuqala.
I-Stout 450 Enduro inezici ezinhle, ezingenakuziqhayisa ngazo zonke izithuthuthu ezikhanyayo. Ake sibheke kuzo ngokuningiliziwe:
Ubude - 232 cm, ububanzi - 83 cm, ubude - 130 cm;
Isisindo sezixhobo ngaphandle kwemishini - 117 kg;
Ukusheshisa okukhulu - kufika ku-150 km / h;
I-tank essoloni enevolumu lama-8.5 amalitha;
I-Motor-stroke, i-single-cylinder, ihlinzeka ngama-30 amalitha. Nge. (Ama-revolution angu-7500) nomthamo we-449 cm 3 ;
Isiqalo sokuqala / ukuqala kagesi;
Ama-Brake - disc hydraulic;
Ukumiswa kwangaphambili kwamukelwa umshini we-telescopic nge-pair of absorck absorbers;
Ukumiswa okwesikhashana - i-pendulum, isisindo esisodwa sokumangalisa.
Lesi sithuthuthu senziwa ngenxa yokusetshenziswa kwe-aluminium, engenayo kuphela ifreyimu, kodwa futhi iningi lezingxenye. Ngemuva kokuqala kokukhiqizwa kwe-serial, i-unit yaqala ukujabulela ukufuna okungenani kune-Stels Enduro 400, okubuyekezwa ngabanikazi bayo okuhle kakhulu.
Ipulasitiki esikhumbeni yinto engavamile kakhulu, yenziwa ngezinto ezivikelayo injini, izihlalo namaphiko, kanye nama-optics. I-fast and powerful ngokwanele ene-4-stroke injini, ehlome uketshezi kwamanzi, iyakwazi ukuvula amahhashi angu-30, okwanele ngesithuthuthu se-enduro esilula.
Ngaphandle, ama-Stels 450 Enduro afana nabalingani baseShayina, kodwa kusekhona okungafani okuphawulekayo. I-optics ekhanda ephumelelayo ne-front fairing ihlukanisa kahle ngemuva kwesinye isithuthuthu sesithuthuthu.
Izinzuzo kanye ne-Cons
Kuzo izinzuzo ezicacile zeSiteli 450 Enduro Faka phakathi:
Injini enamandla futhi enamandla;
Ukwakhiwa kwesithuthuthu esilula;
Ukuvikelwa kwezimoto ezinokwethenjelwa;
Cishe ukulahlwa okuphelele kwepulasitiki;
Ukuhlala okunethezeka nokuhlala kahle;
Ukushaywa okukhulu kokumiswa kanye nesistimu yokukhwabanisa ngekhwalithi.
I-replica yesiNgisi yezithuthuthu zaseShayina;
Kunalokho ivolumu encane ye-tank fuel;
Ngobumba obunamahloni noma endaweni emanzi, ukushayela isithuthuthu kuba nzima kakhulu;
Inani lentengo elingenakulinganiswa lemishini yokugcina.
Kodwa-ke, inzuzo enkulu yalesi simodeli phezu kwamanye amazwe aseShayina ukuthi izingxenye ezithengayo ziyithengeka kakhulu. Ikhwalithi yabo ihambisana nezindinganiso zamazwe ngamazwe. Ungabathenga cishe noma yisiphi isitolo sezimoto, ngoba inkampani ethi "Velomotors", ekhona iminyaka engu-17, ikhula njalo inethiwekhi yayo yomthengisi, ihlanganisa cishe yonke indawo yaseRussia.
Ukukhetha Jetski: iseluleko esiwusizo
Motorcycle "Minsk C4 250": Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Ukulungisa umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli K-68. Carburetors izithuthuthu
I-ZiD-50 "Pilot" - i-moped yaseRussia eyingqayizivele
Beautiful isihlahla sikaKhisimusi kanzashi ka satin kudabuke
Jam amawolintshi: iresiphi nokuthi ukulungiselela dessert
Izimpawu zokukhathazeka - ukukhishwa kwamanzi ngesikhathi sokukhulelwa
Ikhala elivuzayo e Cats: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
ADR - kuyini? Ukulungiswa ku ukuthuthwa kwezimpahla eziyingozi. Ezokuthutha kwezimpahla eziyingozi ngomgwaqo
"I-embasi" likagologo. Ukwakheka, ukukhiqizwa, inani lentengo
AMD Radeon HD 6450: ukubuyekeza ekhadini isiqophi
Kanjani ukugeza upende iingubo bese ugcine Luhambo wakhe?